နော်စူစင်နာလှလှစိုး. ၁၉၆၅ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၁၈ရက်တွင် ရန်ကုန်တိုင
ချပ်သင်း တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ဘေးမဲ့တော
ရွှေဥဒေါင်း တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ဘေးမဲ့တော
ဝင်းအောင် (လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ ၁၉၇၄ ခုနှစ်ဖွား)
ⓘ နော်စူစင်နာလှလှစိုး. ၁၉၆၅ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၁၈ရက်တွင် ရန်ကုန်တိုင်း အင်းစိန်မြို့နယ်၌ မွေးဖွားသည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ သတ္တဗေဒဘာသာရပ်အထူးပြု သိပ္ပံဘွဲ့နှင့် မဟာသိပ္ပံ ..
၁၉၆၅ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၁၈ရက်တွင် ရန်ကုန်တိုင်း အင်းစိန်မြို့နယ်၌ မွေးဖွားသည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ သတ္တဗေဒဘာသာရပ်အထူးပြု သိပ္ပံဘွဲ့နှင့် မဟာသိပ္ပံဘွဲ့ ရရှိသည်။ တက္ကသိုလ်တက်နေစဉ် ကျောင်းသူဘဝကပင် ​World Vision ၌ စာရေးအဖြစ် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် စီမံကိန်းမန်နေဂျာအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရသည်။ World Vision မှတစ်ဆင့် ခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ တက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့ပြီး၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ပင်ဆီဗေးနီးယားပြည်နယ် ဖီလန်ဒဲဖီးယား အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ်၌ အင်န်ဂျီအို ခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ အမ်ဘီအေအတန်းကို သင်ကြားခွင့်ရခဲ့သည်။ ၂၀၀၃ခုနှစ်တွင် ကရင်အမျိုးသမီးများ လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ KWAG သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ရာ ၂၀၁၀တွင် အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
၂၀၂၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကရင်တိုင်းရင်းသားရေးရာ ဝန်ကြီးနေရာအတွက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှပင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရာ ၁၀၆,၁၄၄ မဲ ၇၁.၇၅% ဖြင့် အနိုင်ရသော်လည်း စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့် လွှတ်တော်တက်ခွင့် မရခဲ့ပေ။
၂၀၂၁ ဧပြီလ ၁၆ရက်တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီက အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဖွဲ့စည်းသောအခါ အမျိုးသမီး၊ လူငယ်နှင့် ကလေးသူငယ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဝင်းအောင် (လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ ၁၉၇ ..